Pakistana: Antsoy hoe Pornistan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2010 6:45 GMT
Tamin'iny volana lasa iny, Fox News dia namoaka tatitra mitondra ny lohateny hoe ” Firenena laharana 1 amin'ireo be mpitady any amin'ireo Fikarohana Tranonkalam-betaveta? Antsoy hoe Pornistan izany” ary nanambara fa i Pakistana no laharana voalohany any amin'ireo tanonkala fikarohana vetaveta araka ny tondro ao amin'ny Google. Lasa niteraka adihevitra mafana momba ny sivana aterineto any Pakistana izany tatitra izany. Ny Fitsaràna Avon'ny Lahore, raha nitetika ny handràra ireo vontoaty mamoafady dia nanjary nandidy ny handraràna ireo tranonkalan-tambajotra sosialy toa ny Facebook, Twitter ary na ireo tolotra Blackberry aza. Izany nony injay ny tontolon'ny blaogy nanomboka nimenomenona momba ny olana aterak'ireo tranonkala vetaveta mbola azo idirana nefa ireo tranonkalan-tambajotra sosialy kosa mbola mitohy voasakana.
Ao amin'ny blaogiko manokana, raha naneho hevitra momba ny sivana aterineto sy ny olana momba ireo vontoaty mamoafady, notsiahiviko ny olana momba ireo tranonkala vetaveta mbola azo idirana na dia eo aza ireo asa fanivanana.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny blaogy CHUP – Changing Up Pakistan dia tohina sy rikoriko nahita ilay tatitra:
Na dia tena rikoriko tokoa aza aho (sady raiki-tahotra) fa tazana anaty lisitra ratsy indray isika, tsy dia gaga loatra aho. Satria na teo aza ny Fox sy TIME manambara fa i Pakistana dia “firenena Silamo, malaza noho ny fanajàny ireo fomba mpiaroaro [sy] fivavahana,” manana olona vetaveta fisaina isika, tahaka ny firenena rehetra maneran-tany, (hafatra: ry Pakistane, mitovy amintsika ihany izy ireo!). Misy antony mahatonga ireo toerana fidirana amin'ny aterineto [cyber] aty Pakistana tsentsina olona mahantra manana fisainana maramara, ary tsy noho ny fizahàny mailaka fotsiny izany. Tsy laviko ny fihatsarambelatsihy ao ambadiky ny fanakànana ireo media sosialy sy ireo tranonkala hafa nefa manome alalana ny eo ambony – saingy ny fihatsarambelatsihy dia mitatra amina olana lehibe kokoa ary amin'ny fiarahamonina rehetra. Ny fanoritana ny olana nataon'ny Fox sy ireo orinasa mpanome vaovao hafa ihany koa, raha ny hevitro, dia antony tokony hiadiana hevitra.
Lahatsoratra iray ao amin'ny Kool Muzone no manome fanadihadiana mivelatra kokoa momba ilay tatitry ny Fox:
Androany ny Fox News dia namoaka tatitra momba an'i Pakistana ka niantso azy ho Pornistan ary nilaza fa izy no “Firenena laharana 1 amin'ireo Fikarohana Tranonkalam-betaveta”. Na inona na inona teny manan-danja notanisain'i Fox News dia milaza ny zava-misy ihany izany fa tsy noforomporonina. Tsy mandà ny zava-misy aho fa i Pakistana no laharana voalohany amin'ireo teny manan-danja ireo. Tsy laviko koa ny zava-misy fa malaza ny horonantsary vetaveta aty Pakistana. Na izany aza, laviko ny hoe i Pakistana no “Firenena laharana 1 amin'ireo Fikarohana Tranonkalam-betaveta” i Pakistana, araka ny noalazain'ny Fox News.
Mandritra izany i Google dia nitsipaka ampahibemaso ny mety ho fahamarinan'ireo fomba fikarohany nampiasaina tao amin'ny tatitry ny Fox News ary milaza fa kely loatra ny tahan'ny ohatra ka tsy ho azo antoka ny fahamarinan'ireo vokatra azo.
Ammar Yasir dia nitsikera ilay tatitra raha nanamarika teboka manan-danja momba ny sivana aterineto any Pakistana: